သဘာဝမီးသတ် agate / မွစျကားမဟူရာ / မက္ကဆီကို / ဗွီဒီယို
မီး agate, မွစျကားမဟူရာအမျိုးမျိုး, သာအလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်ပိုင်းမက္ကစီကိုနှင့်အနောက်တောင်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (နယူးမက္ကစီကို, အရီဇိုးနားနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယား) ၏အချို့သောဒေသများရှိယခုအထိရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ Semi-အဖိုးတန်သဘာဝကကျောက်မျက်ဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 24-36 သန်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဤဒေသများအတွက်တက္ကသိုလ်ကာလအတွင်းမှာကြီးမားတဲ့မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမီး agate silica နှင့်သံအောက်ဆိုဒ်နှင့်အတူပြည့်နှက်ရေနွေး, ထပ်တလဲလဲပတျဝနျးကငျြကျောက်၌အက်ကွဲကြောင်းများနှင့်ပူဖောင်းဖြည့်သည့်အခါမီးတောင်၏ဤကာလအတွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးခဲ့ကြသည်။
မီး agate ပွတ်ကျောက်မျက်ရတနာလက်ဝတ်ရတနာအတွက်သတ်မှတ်ထားကြသောအခါကုပ်ခြစ်၏ဖြစ်ပျက်မှုလျော့နည်းစေသည့်5နှင့်7အကြား၏ Mohs Scale အပေါ်မာကျောတဲ့တိုင်းတာခြင်းနှင့်အတူ opal ဆင်တူလှပသောလျှံသက်တံ့အရောင်များ, ရှိသည်။ မိခင်-of ပုလဲတှငျတှေ့အဖြစ် Schiller ကအကျိုးသက်ရောက်မှုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသောမီး agate အတွင်းတွေ့ရသောတက်ကြွလျှံသက်တံ့အရောင်များ, diffract နှင့်အလင်း microstructure အတွင်းအရောင်များကိုတစ်ဦးဝင်ရောက်စွက်ဖက် pass နဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုတော်မူသောအခြားရွေးချယ်စရာ silica နှင့်သံအောက်ဆိုဒ်အလွှာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် ကအမည်ရှိသောအဘို့ကိုမီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ကျောက်အလွှာ။
မွစျကားမဟူရာလင်းကျောက်များနှင့် moganite အလွန်ချော intergrowths ၏ရေးစပ်တဲ့ silica တစ် cryptocrystalline ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားနှစ်ခုလုံး silica သတ္တုဓာတ်များမှာ, ဒါပေမယ့်သူတို့ကလင်းကျောက်အတွက်ကွာခြား moganite monoclinic နေစဉ်တစ် trigonal ကြည်လင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာရှိပါတယ်။ (လင်းကျောက်များ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်အခြေခံပြီး) မွစျကားမဟူရာရဲ့စံဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ SiO2 (ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်) ဖြစ်ပါသည်။
နာမတျောအမွစျကားမဟူရာလက်တင် chalcedonius ကနေလာပါတယ်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Jaspis တစ် translucid မျိုးများအတွက်အသုံးအနှုန်းအဖြစ်ပလင်နီအတွက်အသက်ကြီးရဲ့ Naturalis Historia ပုံပေါ်ပါတယ်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဖြစ်ကောင်းအာရှမိုင်းနားရှိအမြို့ Chalcedon မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဂရိစကားလုံး khalkedon လည်းဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဘယ်နေရာမှာအခြားတွေ့ရှိရမယ့် hapax legomenon ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ယနေ့နာမတော်ဖြင့်လူသိများအတူတူဓာတ်သတ္တုရှိမရှိပြောပြရန်ခဲယဉ်းသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်သဘာဝမီး agate ဝယ်ဖို့